Mogadishu Journal » Ederson goolhayayaashii ugu fiicnaa ee aan arko – Guardiola
Awood gudbinta Ederson waxaa amaanay maamulaha Manchester City Pep Guardiola.
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa calaamadeeyay baasaska Ederson intii ugu fiicneyd ee uu ka arko goolhaye.
Baas dheer oo uu ka helay Ederson ayaa dhigay goolhayaha Ilkay Gundogan kulankii ay City 3/0 uga badisay kooxda Tottenham Sabtidii.
Guardiola ayaa horay u soo jeediyay in goolhayaha uu noqon karo rigooraha City, waa awooda uu ku leeyahay cagihiisa.
Markii uu lasoo shaqeeyay Manuel Neuer ee Bayern Munich iyo Victor Valdes oo Barcelona ah, Guardiola ayaa sheegay in Ederson uu yahay kubad sameeyaha ugu fiican.
"Cagihiisa, isagu waa kan ugu fiican. Tayada baasaska, waxaan dhihi lahaa, ayaa ugu fiican," ayuu yiri.
“Manuel iyo Victor sidoo kale waxay ahaayeen kuwa layaableh laakiin tayada baasaska ayaa ah tan ugu fiican. Ma odhan karo yaa fiican [guud ahaan] sababtoo ah waxaan guulo hore kulahaa aniga iyo ilaaliyaasha cajiibka ah ee Victor, Manuel iyo Eddie.
Wuxuu amaan ka heystaa maamulaha, qolka hurdada iyo ciyaartooyda. Wuu fiicanyahay wuuna ogyahay.
“Laakiin ciyaartoydu way ogyihiin - haddii aad dooneysid amaah iyo in laguu aqoonsado, ku guuleysta kulamada, ku guuleysiga koobab waadna heli doontaa.
"Haddii aadan guuleysan kulamada iyo koobab, maheli doontid. Ma ahan wax ka adag tan."
City ayaa 7 dhibcood oo nadiif ah ku hogaamineysa miiska kala sarreynta Premier League ka hor booqashada Everton ee Arbacada.
Xildh. Odowaa: “Farmaajo waxay shaqadiisii ku dhamaatay inuu difaac ka galo Isgoyska Dabka”